नुन किन थोरै खानुपर्छ ? -
नुन किन थोरै खानुपर्छ ?
२७ कार्तिक २०७७, बिहीबार २१:२३
२०७७ कार्तिक २७ नियमीत रूपमा प्रयोग गरिने नुन वा सोडियम क्लोराइड शरीरको स्वस्थ कार्यका लागि धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । सोडियमले हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन र नियन्त्रणमा राख्न ठूलो भूमिका खेल्छ । जब हामीसँग डिहाइड्रेसन हुन्छ तब शरीरमा नुनको अभाव हुन्छ । यसको कारण यो हुन्छ कि घण्टौंसम्म घाममा खेल्दा, खेलाडीहरूमा डिहाइड्रेसन हुन्छन् र उनीहरूमा मांसपेशीको दुखाइ जस्ता समस्या निम्तिन सक्छ ।
शरीरलाई चाहिने सोडियमको मात्रा केवल २ खाना खाएर पूरा हुन्छ । तर हामी आवश्यकभन्दा धेरै नुन प्रयोग गर्छौं । सत्य यो हो कि हामीमध्ये धेरैजना यसबारे सचेत छैनौं र यस्तो अवस्थामा धेरैले चिन्ता पनि लिँदैनन् ।onlin khbar
फेटा गाउँपालिकामा स्थानीय युवाहहरुद्वारा खर्चको सूचना सर्बजनिक गर्न माग
राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई बिधार्थी नेता सिंहको सहयोग